Yintoni i hoverboard, yenzelwe ntoni kwaye isebenza njani | Iindaba zeGajethi
Yintoni kwaye isebenza njani hoverboard
U-Eder Esteban | | ngokubanzi, Ikhaya
I hoverboard iye yaba yenye yezona mveliso zaziwayo yentengiso kwihlabathi liphela. Luhlobo olungakhange lube semarikeni ixesha elide, kodwa lukwazile ukufumana umkhosi omkhulu wabalandeli kwihlabathi liphela. Nangona kukho abathengi abaninzi abangazi kakuhle ukuba yintoni okanye luncedo lwale mveliso.
Kungenxa yoko, Emva koko siza kuthetha malunga nokuba zeziphi ii-hoverboards nokuba zeziphi. Kuba iyimveliso esiyibonayo rhoqo kwiimarike, kwaye akubonakali ngathi ukuthandwa kwayo kuya kudlula nanini na. Ke, sinolwazi ngakumbi ngabo. Ukulungele ukufumana okungakumbi?
1 Yintoni i hoverboard
2 Isebenza njani iHoverboard
3 Ukuthelekiswa kwemodeli yeHoverboard
3.1 IHiboy TW01-0006
3.2 SmartGyro X2 Mhlophe
3.3 IHiboy TW01S-UL
Yintoni i hoverboard
Umbuzo ophambili ubuzwa ngabathengi abaninzi, kuba uninzi alwazi ngenene ukuba le mveliso iquka ntoni. Eyona nto inokwenzeka, besikhe sayibona ifoto, ividiyo okanye siyibonile evenkileni, kodwa asikacaci malunga nokuba luncedo okanye ukusebenza kwayo.
Kunokuthiwa ukuba i-hoverboard kukuzivelela kwezikreyiti okanye kwizikeyiti. Yisithuthi sombane, esinokuyibona njengokuvela kwezikhuselo zakudala kunye namacandelo. Inyaniso, ngokwendlela yokusebenza, kujongeka njengoku segway, nangona bethatha izinto kwimizekelo emibini esele siyikhankanyile. Yindlela yothutho, eyilelwe ukuba isetyenziswe ikakhulu esixekweni. Ubuncinci, kuyo nayiphi na imeko, kumgama omfutshane.
I-hoverboard yenziwe ngeqonga, apho sinendawo yokubeka iinyawo zethu. Kuwo omabini amacala eqonga, sinamavili amabini, anobungakanani obungafaniyo (phakathi ko-6 no-8 we-intshi yeyona ixhaphakileyo). Umntu oyisebenzisayo umele ukuma ngalo lonke ixesha esisebenzisa. Inokufikelela kwisantya esifikelela kwiikhilomitha ezili-10 ngeyure, nangona ixhomekeke kumandla enjini yemodeli nganye.
Amathuba kukuba, ukhe weva ngebhodi yebhodi ngaphambili. Kodwa ayisiyiyo kuphela igama elaziwa ngalo ezi ntlobo zeemveliso. Kukho amanye amahlelo, osenokuba wakhe weva ngamanye amaxesha, ezifana overkart, self balancing scooter okanye skateboard yombane. Aziqhelekanga njengegama elithi hoverboard, kodwa ukuba ukhe wadibana nala magama, yazi ukuba athetha ukuthini.
Njengoko besesitshilo, ziye zaba yinto ethandwa kakhulu kukujikeleza isixeko. Yindlela efanelekileyo yokuhamba, i-agile kunye nendalo. Kuba zi-100% zombane, ke akukho nto iya kungcoliseka kukusetyenziswa kwazo. Banelungelo lokuncipha ngobukhulu, nto leyo eyenza ukuba kube lula ukuhambisa.
Ndiyabulela ekuthandeni kwabo, abavelisi abaninzi bazise izixhobo kwezi zixhobo ezinje ngombulelo wesihlalo apho siziguqula zaba ikart ye hoverboard, ngohlobo lokuba sihlale ngokungathi yimoto yombane, ngolonwabo olucingayo.
Isebenza njani iHoverboard
Ngokwendlela yoyilo, ii-hoverboards zihlala zingafani kakhulu ukusuka kwenye imodeli ukuya kwenye, mhlawumbi ubukhulu bamavili bohlukile, indawo ezibekwe kuyo izibane okanye umbala. Kodwa uyilo luhlala lulungile ngokufanayo. Yenziwe liqonga elinendawo ezimbini zokubeka iinyawo, ukongeza ekubeni namavili amabini kumacala eqonga, njengoko ubona kwifoto. Bahlala beneemoto ezimbini, kwicala ngalinye leqonga.
IiHoverboards zinikwe amandla ebhetri, ahlala eyi-lithium. Ibhetri esinokuyilayisha ngokulula ekhaya ngetshaja zihlala zizisa. Sikwanazo noluhlu lwee-sensors kuzo, ezinjenge-gyroscopes. Banoxanduva lokufumanisa ubunzima bomntu obusebenzisayo ngalo mzuzu, ukugcina ibhalansi ngalo lonke ixesha. Yeyona nto ibaluleke kakhulu, kuba umntu oyisebenzisayo kuya kufuneka eme ngalo lonke ixesha.
Ukuqhuba i-hoverboard, njengokufuna ukuya kwicala elithile, umsebenzisi kuya kufuneka enze intshukumo ebonisa oko, ngeenyawo zakho. Iintshukumo ezinje ngokucinezela phambili, emacaleni ukujika okanye ukubuya umva, ukuze isithuthi sihambe siye kwicala esilifunayo. Yeyona nto iphambili kwezi ntlobo zeemveliso, nangona ikakhulu ekuqaleni, kunzima ukuziqhuba. Ngumcimbi wokuziqhelanisa.
Ukuthelekiswa kwemodeli yeHoverboard
Nje ukuba sazi ngakumbi malunga nokuba yintoni i-hoverboard, ukongeza ekusebenzeni kwayo, Sinikezela apha ngezantsi iimodeli ezininzi ezikhoyo ngoku kwintengiso. Ngale ndlela, siyawubona umohluko phakathi kwezi modeli, eziza kukunceda uqonde ngcono iintlobo ezahlukeneyo zeebhodi zokuhamba ezikhoyo ngoku. Kwakhona unokufumana enye oyifumana inomdla.
Siqala ngale modeli, yenye yeempawu ezithandwayo kunye nezona ziphezulu kweli candelo. Imalunga ne- hoverboard enamavili esayizi ye-intshi ye-6,5, eyona incinci kwaye ixhaphake kakhulu kwintengiso. Ngamavili angaxhathisiyo, ahambelana kakuhle ne-asphalt kwaye athintela ukutyibilika, into ngokuqinisekileyo enika isixhobo ukhuseleko olukhulu. Sifumana iimoto ezimbini ezingama-250 W, kwivili ngalinye.
Le hoverboard ifikelela kwisantya esiphezulu se-12 km / h, Ngelixa isinika uluhlu lweekhilomitha ezingama-20. Intlawulo yokuqala kufuneka yenziwe ngobusuku bonke, malunga neeyure ezisibhozo, kodwa nje ukuba kwenziwe oku, ixesha ngalinye iyaphela, iiyure ezingama-2-3 zihlala zanele ukutshaja ngokupheleleyo. Ubunzima obuphezulu obuxhasayo yi-100 kilos, into ekufuneka siyithathele ingqalelo xa thina okanye omnye umntu eza kukhwela kuyo.
Sinezibane eziphambili ze-LED ngaphambili kwayo, ezivumela ukuba i-hoverboard ibonwe ebusuku okanye kwiimeko ezinokubonakala okungalunganga, njengenkungu. Kufanelekile ukuba sikhankanye ubukho bumpers zerabha, eziya kuthi zibethe ukubethwa okunokwenzeka, ukuthintela ukonakala kwi-hoverboard. Imodeli esemgangathweni, ethi ngenxa yobungakanani bayo ilungele lonke usapho, ngakumbi abantwana, kuba kunokuba lula kwaye kube lula ukuphatha.
Ukuba unomdla kule modeli, okwangoku Iyafumaneka ngexabiso lama-euro angama-185,97 kwiAmazon, i-38% isaphulelo kwixabiso layo loqobo. Akukho mveliso ifunyenweyoUngayithenga apha »/].
SmartGyro X2 Mhlophe
Olunye uphawu olwaziwa kakhulu kwicandelo le-hoverboard, kunye nemodeli yenye yezona zithengisa kakhulu kwaye inezona zilinganiso zibalaseleyo kubathengi nakwiingcali. Njengesixhobo sangaphambili, ineevili ezingama-intshi ezi-6,5 ubukhulu. Ngamavili aphakamisa ukuxhathisa kwabo, kunye nokunamathela ngokugqibeleleyo kwi-asphalt, evumela ukuqhuba ngokukhuselekileyo ngalo lonke ixesha nayo.
Isantya esinokufikelela ngaso kule hoverboard siphakathi kwe-10 ne-12 km / h, kuxhomekeke kwimeko. Isantya esiqhelekileyo kolu hlobo lwemveliso, esivumela ukuba sihambe kamnandi esixekweni. Inobungakanani bebhetri be-4.000 mAh, obusinika uluhlu lweekhilomitha ezingama-20. Ukutshaja kuthatha malunga neeyure ezintathu ukugqiba. Ukongeza, sinokuhlala sibeka esweni imeko yayo, kuba kukho isalathiso sebhetri kwi-hoverboard uqobo.
Ubunzima obukhulu obuxhaswayo yile modeli zii-120 kilos, into ekufuneka sisoloko siyikhumbula. Inezibane zangaphambili ze-LED, eziza kusivumela ukuba sizibone kuzo zonke iintlobo zeemeko. Kule hoverboard ithile kufuneka ubonakalise ubukho beBluetooth. Isivumela ukuba siyivumelanise kunye ne-smartphone yethu, kwaye sikwazi ukudlala umculo kwi-hoverboard, enkosi kwizithethi zayo. Ukhetho olumnandi kakhulu malunga noku.
Ngaba kunokwenzeka enye yeyona hoverboard ibalaseleyo esikhoyo ngoku kwintengiso. Singayifumana ngexabiso le-189 euros kwiAmazon, eli lixabiso elifanelekileyo, ukuba sithathela ingqalelo iinkcukacha zayo ezilungileyo. Ukuba unomdla kule hoverboard, unako I-SmartGyro X2 UL emhlophe -...yithenge kule ndawo ikhonkco »/].
Imodeli yesithathu esiyibonisa kuwe yeyophawu olufanayo nolokuqala kuluhlu. Enye yeempawu ze-hoverboard ezaziwayo kwimarike. Kwakhona, It is a hoverboard that has 6,5-intshi amavili. Oku kuyenza incinci ngobukhulu, oko kuthetha ukuba ukuqhuba kwayo kunokwenziwa nangabantwana, abangazukuba nangxaki xa beyiphatha.
Isantya esiphezulu esinokufikelelwa ngokusetyenziswa kwayo yi-12 km / h, engaphezulu kancinci kunezinye iimodeli ezikuluhlu olufanayo. Ngelixa ukuzimela kumalunga ne-20 km. Ukutshaja kuhlala kuthatha malunga neeyure ezintathu ukutshaja, ngekhe siphelelwe libhetri, kuba sinesalathiso, enkosi apho kulula kakhulu ukulawula imeko yayo ngalo lonke ixesha. Sineemoto ezimbini ezingama-250W, ezizezona zinceda esi sixhobo ukufikelela kwisona santya siphezulu saso, zibekwe kumavili aso.
Ubunzima obukhulu obuxhaswa yile hoverboard yi-100 kg. Imodeli elula, mhlawumbi yeyona ilula kwezi zintathu, kodwa lukhetho olufanelekileyo lokucinga, ngakumbi ukuba lolokusebenzisa abantwana. Le hoverboard Iyafumaneka ngexabiso lama-euro angama-179,99. Akukho mveliso ifunyenweyoUngayithenga kule khonkco »/].
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Yintoni kwaye isebenza njani hoverboard
Ungazitshintsha njani iifoto zakho zibe ziifoto zePolaroid
Ungasicoca njani isikrini sakho esiphathwayo